ဆီးချို(သွေးချို)ရောဂါ – ဒေါက်တာနန္ဒာမင်းဆွေ M.D. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Contributor, Columnist » ဆီးချို(သွေးချို)ရောဂါ – ဒေါက်တာနန္ဒာမင်းဆွေ M.D.
ဆီးချို(သွေးချို)ရောဂါ – ဒေါက်တာနန္ဒာမင်းဆွေ M.D.
Posted by kai on Aug 24, 2012 in Contributor, Columnist, Health & Fitness |7comments
ဆီးချို/သွေးချိုရောဂါ (Diabetes Mellitus) သည် ယခုအခါ မြန်မာ လူမျိုးများ အပါအ၀င် ကမ္ဘာနှင့်အ၀ှမ်း ရင်ဆိုင်နေရသော ကပ်ရောဂါ (Endemic) တမျိုးဖြစ်ပါသည်။ WHO ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ချုပ်မှ ၂၀၁၁ခုနှစ် သြဂုတ်လ တွင် ထုတ်ပြန်သော စာရင်းဇယားများအရ ကမ္ဘာ့လူဦးရေ ၃၄၆သန်း တို့၌ ဆီးချို/ သွေးချိုရောဂါ Diabetes ရှိနေသည်ဟုခန့်မှန်းထားပါသည်။
• ငယ်ရွယ်စဉ်ကတည်းက စတင်သော Type 1 နှင့်
• အသက်ကြီးမှ စတင်သော Type2ဟုခွဲခြားနိုင်သည်။
• ရောဂါစတင်ချိန်နှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်နွယ်၍ မရနိုင်သော အခြား ဆီးချို/သွေးချို အမျိုးအစားများလည်းအနည်းငယ်ရှိသည်။
ယခုဆောင်းပါးတွင် လူကြီးများ၌ဖြစ်လေ့ရှိသော Type2Diabetesအမျိုးအစားအကြောင်းကိုအဓိကထားဆွေးနွေးတင်ပြပါမည်။
သက္ကရာဇ်၂၀၀၀ပြည့်နှစ်ကဖြစ်သည်။ ကျမ မြန်မာပြည်တွင် အလုပ် သင်ဆရာဝန်လုပ်နေစဉ်က ကျမ၏အမေသည် တလတခါဆိုသလို ဖျားတတ် သည်။ အမေသည် အသက် ၅၅-၅၆ ဆိုသော်လည်း အလွန်ကျန်းမာသူ၊ ကျန်းမာ ရေးလိုက်စားသူဖြစ်သည်။ ကျမကိုမွေးပြီးကာစ၌ ကျောက်ကပ်တွင် ကျောက် တည်ဖူးသဖြင့် ရေကိုဂရုစိုက်၍ သောက်တတ်သည်။ ထို့ကြောင့် အမေ ရေခဏ ခဏသောက်ခြင်းသည် ကျမအတွက် အသစ်အဆန်းမဟုတ်သလိုပင်။ တလ တခါဖျားခြင်းကိုလည်း ဆီးထဲပိုးဝင်သည် (Urinary Tract Infection) ဟုသာ ယူဆ၍ Antibiotics ၀ယ်သောက်၍ဖြေရှင်းခဲ့သည်။ သည်လိုနှင့်၃လဆက်တိုက် ဖြစ်လာသောအခါ ဆီးစစ်ကြည့်မှတော်မည်ဟု စဉ်းစားမိသည်။ ဆီးပိုး ဘက်တီး ရီးယားနှင့် Antibiotic ဆေးမတည့်ဖြစ်နေသည်ဟု ယူဆသောကြောင့် Urinalysis (သာမန်ဆီးစစ်ခြင်း) & Culture (ဆီးပိုးမွေးခြင်း) စစ်ကြည့်သောအခါ ဆီးထဲတွင် သကြားဓါတ်အများအပြား တွေ့ရတော့သည်။
ထိုအခါမှ သွေးဖေါက်စစ်ပြီး ကျမအမေတွင် ဆီးချို/သွေးချိုရောဂါ ရှိနေပြီဟု သိရတော့သည်။ အမေ၏ကိုယ်အလေးချိန်ကျဆင်းခြင်း၊မကြာခဏ ရေငတ်ပြီး ရေများစွာသောက်ခြင်း၊ မကြာခဏဆီးသွားခြင်း၊တလတခါဖျားနာ ခြင်းတို့သည် ဆီးချိုရောဂါကြောင့်ဟု ကျမရော အဖေ(အငြိမ်းစားဆရာဝန်ကြီး)ပါမစဉ်းစားမိခဲ့ကြပါ။
အမေ့ဆီးချိုရောဂါကို ကုသရန် ဒေါက်တာဦးညွန့်သိန်းနှင့်အပ်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၁ခုနှစ်တွင် ကျမ အမေရိကနိုင်ငံသို့ ထွက်လာခဲ့သည်။ အမေ့ကို သွေးချို တိုင်းစက် Glucocard Meter , Test Strips နှင့် သွေးဖေါက်အပ် Lancets များ ကို ၀ယ်ပေးခဲ့ပြီး တပါတ်/နှစ်ပါတ်တခါ သွေးဖေါက်စစ်ရုံဖြင့် လုံလောက်ပြီဟု ထင်မှတ်ခဲ့သည်။ ကျမကိုယ်တိုင် အလုပ်သင်ဆရာဝန်လုပ်ပြီးခဲ့၍ ဆီးချိုရောဂါ ကုဆရာဝန်ထံ သွားပြသည့်အခါ ၃လစာပျမ်းမျှသွေးချိုဓါတ်ကို စစ်ဆေးသည့် Hemoglobin A1C ကို သွေးဖေါက်စစ်ရသည်လောက်ပဲ သေချာသိခဲ့သည်။ ၂၀၀၃တွင်အသက်၆၅နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ ကျမအဖေမှာလည်းဆီးချိုရောဂါရှိနေပြီဟုသိရသည်။
ယခုဤဆောင်းပါးရေးခြင်းသည် ကျမ၏မိဘများနှင့်နည်းတူ ဆီးချို ရောဂါရှိနေကြသော၊ ကျမနှင့်နည်းတူ မိဘမျိုးရိုးရှိကြသော မြန်မာများအား ကျမ သင်ယူနားလည်ထားသောဆေးပညာဗဟုသုတကိုဝေမျှရန်ဖြစ်ပါသည်။
၁။ မိဘမျိုးရိုး (မိသားစုဝင်များတွင်ဆီးချိုရောဂါရှိခြင်း)
၂။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်သွေးချိုဓါတ်ရှိဘူးခြင်း (Gestational Diabetes)
၃။ အချိန်တိုအတွင်း ကိုယ်အလေးချိန်တက်လာခြင်း
“အချိုသိပ်မစားနှင့်၊ ဆီးချိုဖြစ်လိမ့်မယ်” ဟုကြားဘူးကြပါလိမ့်မည်။ သို့သော် ဘယ်လိုအရာတွေက “အချို” အမျိုးအစားထဲပါသည်ကို သေချာသိဖို့ လို အပ်ပါသည်။ “ကိတ်မုန့်၊ အိုက်စကရင်၊ သကြားလုံး၊ ချိုချဉ်၊ ဆိုဒါအချိုရည်၊ Doughnut ” များသည်သာ“အချို”မဟုတ်။ ကျမတို့မြန်မာလူမျိုး နေ့စဉ်၂ ကြိမ်မှ ၃ ကြိမ်စားသုံးနေသော ထမင်းသည်လည်းထိပ်တန်း“အချို”စာရင်းဝင်ဖြစ်သည်။
ထမင်း(Rice) စားသုံးခြင်းနှင့် ဆီးချိုရောဂါဆက်နွယ်မှုကို အနောက် တိုင်းဆေးပညာက မှတ်တမ်းတင်လာကြပြီဖြစ်သည်။ ထို့အတူ အာလူး၊ ဆန် ခေါက်ဆွဲ (မုန့်ဟင်းခါး၊ မုန့်တီ) တို့သည်လည်း အချိုဓါတ်တန်းတူပါပါသည်။
ထို့ကြောင့် ဆီးချိုရောဂါကာကွယ်ရန်မှာ မီးဖိုချောင်မှ၊ထမင်းစားပွဲမှ စတင်ရမည်ဖြစ်သည်။ Brown Rice, Pasta, Brown Bread များသည် ကျန်းမာ ရေးနှင့်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သည်။ သို့သော် ကျမတို့မြန်မာများအဖို့ ဆန်ကြမ်းကို မည်သို့မျှ ခံတွင်းမတွေ့နိုင်ကြပေ။ ကျမမိဘများ ကိုယ်တိုင်မစားနိုင်သော အစာ ကို မည်သူ့ကိုမျှ ကျမ မညွှန်းလိုပါ။ ထို့ကြောင့် စားနိုင်လျှင်တော့ထို “Brown”များ ကိုပဲစားကြပါဟု အကြံပေးလိုပါသည်။ မစားနိုင်သူများအနေနှင့်တော့ ဆန်ဖြူ မွှေးကို “လျှော့”စားကြဖို့ အဓိကတိုက်တွန်းလိုပါသည်။ မိဘမျိုးရိုးတွင် ဆီးချိုရော ဂါ အခိုင်အမာရှိသူ (ကျမလိုလူများ)၊ မိမိကိုယ်တိုင် ဆီးချိုရောဂါ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိ သည်ဟု ခန့်မှန်းခံရသူများ (PreDiabetic, Borderline Diabetic) အနေဖြင့်စားနေကျထမင်းပမာဏထက်များစွာလျှော့စားကြရန်အထူးလိုအပ်ပါသည်။
ခါတိုင်း ထမင်းစားဇွန်း ၁၀ဇွန်းစာ စားနေကျဆိုပါစို့။ ၅ဇွန်း၊ ၆ဇွန်းနှင့် ကျေနပ်နိုင်အောင်ကြိုးစားသင့်သည်၊ ‘ဗိုက်မ၀ဘူး’ဟု ဆင်ခြေပေးမည်ကြံလျှင် ထမင်းမစားမီ ရေသောက်ဖို့တိုက်တွန်းလိုပါသည်။ ၈ မှ ၁၂ အောင်စ ရေတဖန် ခွက်စာကို ထမင်းမစားမီ သောက်လိုက်ခြင်းဖြင့် အစာအိမ် နေရာအတော်များ များကိုပြည့်စေပါသည်။ ထို့အပြင် အသီးအရွက် (Salad or Vegetable) များ ပိုစား ခြင်းဖြင့်လည်းဗိုက်တင်းပြည့်စေနိုင်သည်။ ထမင်းဖြူ/ပေါင်မုန့်ဖြူမှရမည့် အင် အားဓါတ် (Calorie) ကို အစားထိုးရန် Protein(အသားဓါတ်)ကို ပို၍တိုး၍ဖြည့် တင်းစားရမည်ဖြစ်သည်။ အတိုဆုံးပြောရလျှင် ထမင်းကို ထက်ဝက်လျှော့စား၍ အသားနှင့်အရွက်ကိုတိုးစားခြင်းဖြင့် Diabetes onset (ဆီးချိုရောဂါစတင်ဖြစ် ခြင်း)ကို နောက်ကျစေနိုင်သလို၊ ဆီးချိုရောဂါ ဖြစ်နေလျှင်လည်း ထိန်းထားနိုင်ပါ သည်။ ခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင် သကြားဓါတ်သို့ ပြောင်းလဲနိုင်သောအစားအစာအားလုံးကို ကာဗိုဟိုက်ဒြိတ်ဟုခြုံ၍ခေါ်ပြီး ကာဗိုဟိုက်ဒြိတ် များသော ဆိုဒါအချိုရည်၊ သကြားလုံးချိုချဉ်၊ Pasta, Burrito, Tortilla စသည်တို့ကိုလည်း အထူးသတိထား ပြီးလျှော့စားသင့်ပါသည်။
ပထမဆင့်အနေနှင့် အစားဆင်ခြင်နိုင်ရမည်ဖြစ်ပြီး ဒုတိယဆင့် အနေနှင့် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုကို ဂရုပြု၍ လိုက်စားသင့်ပါသည်။ Gym သို့သွားမှ Trainer နှင့်လေ့ကျင့်မှ Exercise လုပ်တာမဟုတ်ပါ။ နေ့စဉ်ပုံမှန် နာရီဝက်၊ တ နာရီခန့် လမ်းလျှောက်ခြင်းကို မှန်မှန်ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း ပိုလျှံနေ သော သကြားဓါတ်များကို သုံးစွဲလိုက်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် အလုပ်တွင်၊ ကျောင်းတွင်၊ ဈေးဝယ်သွားရာတွင်တို့၌လည်း ကားကိုဝေးဝေးမှာရပ်၍ လမ်း လျှောက်ခြင်း၊ ဓါတ်လှေကားနှင့် စက်လှေကားအစား လှေကားထစ် များကို အသုံးပြုခြင်းတို့ဖြင့်Exercise ကိုလုပ်ဖြစ်အောင် ရှာကြံသင့်ပါသည်။ ယခုခေတ် ကာလတွင် လူကိုသက်သာစေသော အသုံးအဆောင်ကိရိယာများစွာတို့သည်ကျမတို့ကိုဆီးချိုဖြစ်စေသောအဓိကအထောက်အပံ့များဖြစ်ပေတော့သည်။
ဆောင်ရန် နှင့် ရှောင်ရန်
ဆီးချိုရောဂါ ဖြစ်တော့မည်၊ ဖြစ်နေပြီဆိုလျှင် ကျမတို့ ခန္ဓာကိုယ်မှ Insulin (အင်ဆူလင်) ထုတ်လုပ်မှုသည် သွေးအချိုဓါတ်ကို မထိမ်းနိုင်တော့သည့် အခြေအနေသို့ ရောက်နေပါသည်။ ဆီးချိုရောဂါဟု မသိခင်ကာလ၌ Pancreas (ပန်ကရိယ)သည် သွေးအချိုဓါတ်ကို ပုံမှန်ဖြစ်အောင် ထိန်းသိမ်းနိုင်ရန် အလုပ် များစွာပိုလုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဆီးချိုရောဂါရှိနေပြီဟု ဆရာဝန်ကသတ် မှတ်လိုက်ချိန်သည် အင်ဆူလင် ထုတ်လုပ်မှုကို မနိုင်နင်းတော့ဟု အချက်ပြချိန် ပင်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ပန်ကရိယ မှ အခြားဟော်မုန်းဖြစ်သော Glucagon (အသည်းတွင် သိမ်းထားသော သကြားဓါတ်ကို သွေးထဲသို့ ဖြန့်ပို့ပေးသော ဟော် မုန်း) ထုတ်လုပ်မှုကလည်း Out of Balance စည်းချက်မညီတော့ပဲ မလိုအပ်ပဲသ ကြားဓါတ်များကိုသွေးကြောထဲပြန်ပို့နေတတ်သည်။
ထိုဖြစ်စဉ်များကို ပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်ရန်နှင့် ပိုမဆိုးအောင် တားဆီး နိုင်ရန် ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ကုသသင့်ပါသည်။ လူနာတဦးချင်းစီ၏ ကျောက်ကပ် အခြေအနေ၊ အသည်းအခြေအနေ၊ သွေးချိုအတိုင်းအဆပေါ်လိုက်၍ ဆရာဝန် များက မည်သည့်ဆေးကို စတင်ရမည်၊ မည်သည့်အချိန်တွင် တိုးခြင်း၊ လျှော့ခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်း၊ အသစ်ထပ်မံပေးခြင်းပြုရမည်ကိုဆုံးဖြတ်ရပါသည်။ ထို့ကြောင့် နေ့စဉ် လက်ချောင်းထိပ်ဖောက်သွေးစစ်ခြင်း (Finger-Stick Glucose Monitoring) သည်လည်း အရေးပါသောရောဂါထိန်းသိမ်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ထို့အပြင် ဆီးချိုရောဂါတခုတည်းကပင် နှလုံးသွေးကြော၊ ဦးနှောက်၊ အာရုံကြောနှင့် ကျောက်ကပ်တို့ကို ထိခိုက်ပျက်စီးစေရုံသာမက သွေးတိုးရော ဂါ၊ Cholestrol သွေးအဆီတိုးခြင်းတို့နှင့် ပေါင်းစပ်၍ ပိုဆိုးသော ရောဂါများကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ သွေးတိုး၊ ဆီးချို၊ Cholestrol မြင့်တက်ခြင်းနှင့် ခန္ဓာကိုယ် အလေးချိန်တိုးလာခြင်း စသည့်အခြေအနေမျိုးကို Metabolic Syndrome ဟု ခေါ်သည်။ Metabolic Syndrome သည် နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါ၊ ကျောက်ကပ်အားနည်းခြင်း၊ ဦးနှောက်သွေးကြောပိတ်ရောဂါ (လေဖြတ်ခြင်း၊ လေဖြန်းခြင်း) နှင့် အာရုံကြောအားနည်းခြင်း (ခြေလက်ထုံကျဉ်ခြင်း၊ တခါတရံ ဆူးစူးသကဲ့သို့နာကျင်ခြင်း) များကို ဦးတည်ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။
ထို့ကြောင့် ဆီးချိုရောဂါရှိသူများအတွက် Target သွေးပေါင်ချိန်၊ Cholestrol (LDL) များသည် ဆီးချိုရောဂါမရှိသော သာမန်လူများထက် လျော့ နည်းရမည်ဖြစ်သည်။ နှလုံးရောဂါ၊ နှလုံးသွေးကြောပိတ်ရောဂါ (Heart Attack)၊ ဦးနှောက်သွေးကြောပိတ်ရောဂါ (လေဖြတ်ခြင်း) ဖြစ်ဘူးသူများဆိုလျှင် သာ၍ ပင်နိမ့်သော Target Value များ၌ ထိန်းသိမ်းထားရမည်ဖြစ်သည်။ သို့မှသာ နောက်ထပ် Attack များဖြစ်ပွားခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်ပါမည်။
ဆီးချိုရောဂါရှင်အများစုသည် သောက်ဆေး သောက်နေကြရသူ များပါသည်။ သို့သော်အချို့မှာ အင်ဆူလင် နှင့်အလားတူထိုးဆေးများဖြင့် ကုသ ကြရပါသည်။ လူနာအများစုမှာ အင်ဆူလင်နှင့်ထိုးဆေးများကို ကြောက်တတ် ကြပါသည်။ လေသံမျှပင် မကြားလိုကြပေ။ အင်ဆူလင် ထိုးရမည် (သို့မဟုတ်)ထိုးဆေးတမျိုးမျိုးသုံးရတော့မည်ဆိုလျှင် “ဘ၀ဆုံးပြီ” “ရောဂါဂိတ်ဆုံးပြီ” ဟု မှတ်ထင်ကြပါသည်။ ထိုသို့သဘောမပိုက်စေလိုပါ။
ရောဂါအခြေအနေပိုဆိုးလာသည်ဟု မှတ်ထင်နိုင်သည့်အကြောင်း မှာ သောက်ဆေးဖြင့် သွေးချိုဓါတ်ကို လျှော့ချနိုင်မှုလျော့လာခြင်း၊ ကျောက်ကပ် အခြေအနေကြောင့် သောက်ဆေးရွေးချယ်မှုနှင့် Dose မြင့်တင်ရန်ခက်ခဲခြင်းတို့ ကြောင့် အင်ဆူလင် ထိုးရခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။
သို့သော် တခါတရံ ရောဂါအခြေအနေ “ပို” ဆိုးလာခြင်းမဟုတ်ပဲ ဆီးချိုရောဂါရှိကြောင်းစတင်သိရှိချိန် နှင့် ဆီးချိုရောဂါရှိမရှိစစ်ဆေးနေချိန် တို့ တွင် သွေးချိုဓါတ် အလွန်အမင်းလွန်ကဲခြင်းကြောင့်၎င်း၊ ပဋိသန္ဓေရှိနေခြင်း ကြောင့်၎င်း၊ ခွဲစိတ်ကုသမှုကာလတ၀ိုက် အနာကျက်မြန်စေရန်အတွက်၎င်း၊ အင်ဆူလင်ကို အသုံးပြုရသည်။ ထို့ကြောင့် ဆီးချိုလူနာဖြစ်နေသည့်ကျမတို့ မြန်မာလူမျိုးတို့သည် သက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်က အင်ဆူလင် (သို့မဟုတ်) အခြား ထိုးဆေးများသုံးစွဲရန် ညွှန်ကြားလာပါက အကြောင်းရင်းကို သေချာစွာ မေးမြန်း ဆွေးနွေးပြီး လက်ခံလိုက်နာကြစေလိုပါသည်။ သို့သော် မိမိသုံးရမည့် အင်ဆူ လင် အမျိုးအစားနှင့် ပတ်သက်၍ သိသင့်သမျှကို ရှင်းလင်းစွာ သိရအောင်တော့ ဆရာဝန်အားမေးမြန်းသင့်ပါသည်။ သို့မှသာ မမျှော်လင့်သော သွေးချိုဓါတ် ရုတ် တရက်ကျဆင်းခြင်း (Hypoglycemia) မှရှောင်ကြဉ်နိုင်ပြီး မလိုအပ်ပဲ အင်ဆူ လင်ကို ကြောက်ရွံ့ခြင်းမဖြစ်ပေါ်တော့ပါ။
အမေရိကနိုင်ငံတွင် နေထိုင်ကြသော မြန်မာများကို အသိပေးလို သည်မှာ ဆီးချိုရောဂါပညာပေးသင်တန်းများ၊ ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချရေးသင်တန်းများ၊ ကျန်းမာစွာစားသောက်နေထိုင်ရေးသင်တန်းများစွာ အခါအား လျော်စွာရှိတတ်ပါသည်။ County ဆေးခန်းများ၊ဆေးရုံများ၊တက္ကသိုလ်ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းများ၊ ကွန်မြူနတီပွဲများတွင် ပြုလုပ်လေ့ရှိသော အခမဲ့ ကျန်းမာရေး ပညာပေးသင်တန်းများကို သွားရောက်နားထောင် ပညာယူနိုင်ကြပါကြောင်း အသိပေးလိုက်ပါသည်။♦
မှတ်ချက်။ ။ မန္တလေးဂဇက် ဇွန်လ ၂၀၁၂ ထုတ်တွင်ဖေါ်ပြပြီးဖြစ်ပါသည်။
Kai has written 995 post in this Website..
ခုလိုထပ်မံ ဖော်ပြပေးလို့ ကျေးဇူး အထူး တင်ပါတယ် သူကြီး ခင်ဗျာ ! ပြီးခဲ့တဲ့ ( ၁ ) ပတ်ကျော် ( ၂ ) ပတ် လောက်ကပဲ ဆီးချို ရောဂါနဲ့ရန်ကုန်အထိ လာပြီး အမေ ဆေးဝါးကုသမှုပြုခဲ့ပါတယ် ။ ဒီ ပို့ ( စ ) လေးကို အမကိုလည်း ဖတ်ခိုင်းရပါမယ် ။ လက်ရှိ အမ က အနီးကပ်ပြုစုနေသူဆိုတော့လေ — ။
သူကြီးပြန်တင်ပေးတာ အတော်ပြည့်စုံပါ၏။ ကျွန်တော် ဆီးချို(သွေးချို) ကျစေနိုင်တဲ့ ဟင်းရွက်လေးတွေ ဘဲကွန့်လိုက်တော့မယ်။
၁။ ကြွက်နားရွက်မှို မှာပါရှိတဲ့ ပေါ်လီဆက်ထရိုက်ဟာ သွေးချိုကိုကျစေနိုင်စွမ်းသတ္တိရှိပါတယ်။ ကြော် ချက် ဟင်းရည် အမျိုမျိုး လုပ်စားလို့ရပါတယ်။
၂။ ကြက်ဟင်းခါးသီးက ထုတ်ယူရရှိတဲ့အရာဟာ သွေးချိုကိုကျဆင်းစေနိုင်စွမ်း သတ္တိရှိပါတယ်။ သူကကြော် ချက် ပြုပ် ဟင်းရည်လုပ်သောက်ရုံတင်မက အခြောက်လှန်းပြီးနောက် လည်း ရေနွေးနဲ့ခပ်သောက်လို့ ရပါတယ်။
၃။ မုန်လာဥနီမှာလည်း သွေးချိ်ုကိုကျစေနိုင်စွမ်း သတ္တိရှိပြီး ကြော်စားသင့်ပါတယ်။
၄။ အညိုရောင် သန်းနေသော ကန်စွန်းရွက်ထဲမှာ အင်ဆူလင်လို ဓာတ်မျိုးပါလို့ ဆီးချိုရောဂါကို သက်သာစေနိုင်စွမ်း ရှိပါတယ်။ ကြော်၍ဖြစ်စေ ရေနွေးဖျော်ပြီးသုပ်၍ဖြစ်စေ မြုပ်တို့လို့ဘဲဖြစ်စေ စားနိုင်ပါတယ်။
၅။ ကြက်သွန်နီမှာ ဆေးဘက်ဝင်အစွမ်းအာနိသင်ရှိပါတယ်၊ သွေးအဆီကျစေတယ်၊သွေးပလာစမာ ခဲစုမှုကို တားနှိမ်ပေးတယ်၊ ပန်းနာသက်သာစေပြီး သွေးချိုကိုကျစေတဲ့ စွမ်းရည်ထူးလည်းရှိပါတယ်။ အစိမ်းလိုက်စားနိုင်သလို ကြော်ချက်ပြီးလည်းစားနိုင်ပါတယ်။
၆။ ကြက်သွန်ဖြူမှာ ရောဂါပိုးသတ်ခြင်း၊ ဗိုင်းရပ်ပိုး ခုခံခြင်း၊ ရောင်းရမ်းနာကျခြင်း၊ အကျိတ်ဖု သက်သာစေခြင်း သွေးအဆီကျခြင်း၊ သွေးကြောနဲ့ ကျောက်ကပ်တွေကို အားပေးနိုင်ခြင်း၊ သွေးချို ကျစေခြင်း၊ ဆီးချိုသမားများကြက်သွန်ဖြူကို ဆေးဝါးအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်၊ အစိမ်းလိုက် စားခြင်း၊ ပြုတ်စားခြင်း၊ မီးအုံစားခြင်း၊ ဟင်းခတ်အစာပလာအဖြစ်လည်းသုံးစွဲနိုင်ပါတယ်၊
၇။ မျောက်ဥမှာ ဆီးချိုရောဂါ ကာကွယ်ရေးနဲ့ ကုသရေးအတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ အစွမ်းသတ္တိထူး ရှိတယ်၊ ကျောက်ကပ်အထက်စီးက စိမ့်ထွက်တဲ့ အဒရီနလင်း Adrenaline နဲ့ ဂလူးကိုစ့် သကြားတို့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ သွေးချိုမြင့်မှုကို တားဆီးနှိမ်ပေးနိုင်တယ်၊ ဟင်းရည်ကျိုသောက် လို့ဘဲဖြစ်စေ ကြော်ချက်လို့ဖြစ်စေ စားသုံးနိုင်ပါတယ်။
ပြီးတော့ ကြက်ဟင်းခါးသီး(၁၀၀)ဂရမ်ကို အမှုန့်ပြု၍ လဘက်ဇွန်းတ၀က်ခန့် တစ်နေ့သုံးကြိမ်းသောက်ပါ။ အရွက်သတ္တုရည်ကို ဟင်းစားဇွန်း ဇွန်းကြီးတစ်ဇွန်းဖြင့် တစ်နေ့ နှစ်ကြိမ်သောက်ပါ။ တစ်လရှိသော အခါ သွေးထဲမှ သကြားဓာတ်ကို ပုံမှန်အဆင့် ကျဆင်းလျော့ပါးစေပါသည်။
ကျေးဇူးပါ ကိုခင်ခ ရေ !
ကြက်ဟင်းခါးသီး စားရင် သွေးတိုးတတ်တယ်နော်။ သွေးချိုကျပြီး သွေးတိုးတွေ တက်လာလိမ့်မယ်။ သတိတော့ ထားစားသင့်တယ်။ အဖေ တုန်းက ကိုယ်တွေ့မို့ ပြောပြတာ။
သဂျီးကို မြန်မာနိုင်ငံမှာ လက်ရှိ ဆီးချို သမားတော်တော်များများ သုံးနေကြတဲ့ နည်းလေးတွေ ပြောရဦးမယ်
တစ်ချို့ က ရွှေနဲ့ ပလက်တီနမ် နဲ့ စပ်ထားတဲ့ ဟန်းချိန်းတွေ ပတ်ကြတယ်
တစ်ချို့ ကြတော့ ကျောက်စိမ်းပုတီးလုံးတွေနဲ့ လုပ်ထားတဲ့ လက်ပတ်မျော့ကြိုးတွေကို ပတ်ကြတယ်
အဲဒီလို ပတ်လို့ ဘာအကျိုးရှိသလဲ ဆိုတာကို ဂေဇက်က သိပြီးသားလူများ ဆက်ဆွေးနွေးကြပါခင်ဗျ